होटल उद्घाटन गर्न पोखरा पुगेका प्रधानमन्त्री ओली किन त्यसै फर्किए ? | रिपोर्टर्स नेपाल
२०७६ असार ११ बुधबार, ०७:४४
होटल उद्घाटन गर्न पोखरा पुगेका प्रधानमन्त्री ओली किन त्यसै फर्किए ?
२०७६ जेष्ठ १९ गते प्रकाशित, l ०७:०१
काठमाडौं १८ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी ओली शनिबार होटल उद्घाटन समारोहमा पुगेर पनि उद्घाटन नगरी फर्किएका छन् । पोखराको लेकसाइडमा रहेको स्विस इन्टरनेसनल होटल सरोवरको शनिबार उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । शनिबार बिहान साढे ९ बजे प्रधानमन्त्रीबाट होटलको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम थियो ।
साढे ९ बजे प्रधानमन्त्री आइनपुगेपछि काठमाडौंबाट आउनेवित्तिकै होटलको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम मिलाइएको थियो। यसको लागि होटल व्यवस्थापनले सबै बन्दोबस्त पनि गरिसकेको थियो। होटलले प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख अतिथि र युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मा, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, प्रदेश सांसद, पत्रकार लगायत सबैलाई निमन्त्रणा गरेको थियो। निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै अतिथिहरु बिहान ९ बजे नै कार्यक्रमस्थल नै पुगेका थिए।आयोजकले खाना तयारी अवस्थामा राखिसकेको थियो।
जब प्रधानमन्त्री साढे १० बजे पोखराविमास्थलबाट सोझै होटल पुगे त्यसपछि सबै खुशी भए। प्रधानमन्त्री होटल पुगेवित्तिकै ‘केहीबेर’ मा नै होटलको उद्घाटन हुने भनेर सूचना प्रवाह गरियो। त्यसको केही मिनेटमा फेरि प्रधानमन्त्रीले होटल उद्घाटन नगर्ने भनेर सूचना फैलियो। आयोजकले भने उद्घाटन हुने भनेर पटकपटक आमन्त्रितहरुलाई सूचना प्रवाह गरिरहे।
त्यसको केहीबेरमा प्रधानमन्त्री स्काउटको कार्यक्रममा जाने र लुगा फेर्ने र खाना खाने मात्रै सूचना फिजाइयो। आयोजकले प्रधानमन्त्रीबाट होटल उद्घाटन गर्ने भनेर शिलालेख समेत तयार पारिसकेको थियो। उक्त शिलालेखलाई रातो कपडाले ढाकेर राखिएको थियो। ११ बजेतिर अर्को सूचना आयो अब प्रधानमन्त्रीले होटल उद्घाटन नगर्ने पक्का। यो सूचना फैलिए पनि आयोजकले भने १५ मिनेटमै कार्यक्रम सुरु हुने भने। यस्तो घोषणा गर्ने वित्तिकै पत्रकारहरु बाहिर निस्किए। अनि अरु अतिथि पनि निस्किए।
होटलमा केहीबेर आराम गरेर, स्काउटको लुगा लगाएर प्रधानमन्त्री स्काउटको कार्यक्रम तिर हानिए।
किन उद्घाटन गरेनन् प्रधानमन्त्रीले होटल?
लेकसाइडमा रहेको १४ नम्बर (मीरा) गल्ली मा बनाइएको उक्त होटल ९ तलाको छ। होटलका सञ्चालक हुन् भरत पहारी। पहारी तिनै व्यक्ति हुन् जो पटकपटक विवादमा परेका मात्रै होइनन् विशेष अदालतले भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी पनि देखाएको थियो।
गत मंसिरमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा फैसला हुँदा उनी दोषी ठहरिएका थिए। ९८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै विशेष अदालतले उनलाई कैद तथा जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो।
अख्तियारले पहारीले अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै २०७३ साउन २४ मा ४ करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको विगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले उनकी श्रीमतीविरुद्ध पनि अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ। अझ रमाइलो त के छ भने पहारीले महानगरको मापदण्ड निर्धारण सिफारिस समितिको संयोजकसमेत रहेर काम गरेका थिए। आफैं मापदण्ड निर्धारण सिफारिस समितिको संयोजक बनेर आफैंले मापदण्ड मिचेर होटल बनाएको आरोप छ उनीमाथि।
होटल उद्घाटन गर्न पुगेका ओलीलाई सुरुमा यो कुरा थाहा नभएको र त्यहाँ पुगिसकेपछि उनका सल्लाहकारले बताएका थिए। होटल मापदण्डविपरीत छ भन्ने थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री उद्घाटन गर्नबाट पछि हटेका थिए। प्रधानमन्त्री निकटका एक नेतका अनुसार उद्घाटन गर्ने भनेर पहिल्यै समाचारमा आलोचना भएको र उद्घाटन गरेपछि थप आलोचित हुने अनुमानले ओलीले होटल उद्घाटन नगरेका हुन्।